Fitsipika momba ny dia any Korea Avaratra: voarara ny fitsangatsanganana mpizahatany any Korea Avaratra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Korea Avaratra » Fitsipika momba ny dia any Korea Avaratra: voarara ny fitsangatsanganana mpizahatany any Korea Avaratra
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Enga anie 26, 2017
Nisy mpivady solontena amerikanina mpivaro-tena nanolotra lalàna mikendry ny hisakanana ny mpizahatany amerikanina tsy hankany Korea Avaratra. Ao anatin'ny fihenjanana misy eo amin'i Pyongyang, dia nanolotra volavolan-dalàna mandrara ny fitsangatsanganana an-tanindrazana any amin'ny firenena ivoho ny kongresy.
Ny solontena Adam Schiff (D-California) sy i Joe Wilson (R-South Carolina) dia nanolotra ny lalàna momba ny fitsangatsanganana Korea Avaratra tamin'ny Alakamisy, nitady ny hanakanana ireo visa mpizahatany amerikana rehetra any Korea Avaratra ary mitaky alalana manokana amin'ireo fitsidihana hafa rehetra.
"Ny fitsangatsanganana ataon'ny mpizahatany any Korea Avaratra dia tsy manao afa-tsy ny manome vola ho an'ny fitondrana tsy refesi-mandidy - izay hampiasaina hamolavola fitaovam-piadiana handrahona an'i Etazonia sy ireo mpiara-dia amintsika koa," hoy i Wilson tao anaty fanambarana iray.
"Ny ratsy indrindra, dia nigadra matetika ny fitondrana sivily vahiny tsy manan-tsiny ary nampiasa azy ireo ho toy ny chips fanaovana varotra mba hahazoana fitokisana amin'ny Tandrefana," hoy hatrany izy. “Tsy tokony havelanay intsony izy ireo - izany no antony maha-mafy ny mifehy tsara ny dia mankany Korea Avaratra.”
Ity volavolan-dalàna ity dia hiteraka fandraràna tanteraka ny fizahan-tany ataon'ny Amerikanina, raha misy fitsidihana hafa kosa mila fahazoan-dàlana manokana avy amin'ny Departemantan'ny Tahirimbolam-panjakana, hoy ny loharanom-baovao iray tamin'ny kongresy tamin'ny Reuters. Ny programa momba ny fahazoan-dàlana mitovy amin'izany dia manan-kery amin'ny fitsangatsanganana any Kiobà, na dia namelombelona ny fifandraisana tamin'ny firenena-nosy aza i Etazonia.
Amerikanina 17 farafahakeliny no nogadraina tany Korea Avaratra tao anatin'ny folo taona lasa, ary efatra no migadra ao.
Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nisy ny fitomboan'ny fitsangatsanganan'ny mpizahatany tany Korea Avaratra ny olom-pirenen'ireo firenena tandrefana, anisan'izany i Etazonia, "hoy i Schiff. "Miaraka amin'ny fihenan'ny fihenjanana any Korea Avaratra, ny loza atahorana ny Amerikanina noho ny antony politika dia lehibe kokoa noho ny teo aloha."
Hatramin'ny volana lasa teo, amerikana roa no voatazona any Korea Avaratra noho ny fiahiahiany ny fikasana hanao “hetsika fankahalana” hamelezana ny firenena. Kim Hak-song, voatazona tamin'ny voalohan'ny volana Mey, ary Kim Sang Dok, izay voasambotra tamin'ny 22 aprily, dia samy niasa tao amin'ny Oniversiten'i Pyongyang momba ny siansa sy ny teknolojia.
Teratany amerikana roa hafa, pasitera kristiana-amerikanina Kim Tong Chul ary mpianatra any amin'ny oniversite Otto Warmbier, no voaheloka noho ny heloka bevava. Nomelohina asa an-terivozona 10 taona i Kim noho ny fiampangana fitsikilovana sy fanodinkodinana, i Warmbier kosa voaheloka higadra 15 taona satria nangalatra sora-baventy tao amin'ny hotely Pyongyang.
Fotoana fohy taorian'ny fisamborana farany, namoaka fampandrenesana momba ny dia ho an'ny Korea Avaratra ny Departemantam-panjakana amerikana, ary nilaza fa “mampitandrina mafy ny olom-pirenena amerikana tsy handeha ho any Korea Avaratra izy ireo.”
“Tandindomin-doza tokoa ny fisamboran'ny olom-pirenena amerikana ao amin'ny DPRK amin'ny fisamborana sy fitazonana azy ireo mandritra ny fotoana maharitra eo ambanin'ny rafitry ny fampiharana lalàna any Korea Avaratra,” hoy ny fampitandremana. “Ity rafitra ity dia mametraka sazy henjana noho ny fihetsika tsy hoheverina ho heloka bevava any Etazonia ary mandrahona ireo gadra amerikana ho tsaboina mifanaraka amin'ny 'lalàna ady' an'ny DPRK.”
Washington dia tsy mitazona ny fifandraisana diplomatika amin'i Pyongyang ka ny governemanta amerikana dia tsy manana fomba hanomezana fanampiana ny konsily ho an'ireo amerikana voatazona any Korea Avaratra. Taloha, ny filoha teo aloha Bill Clinton sy Jimmy Carter dia nankany Pyongyang mba hifampiraharaha amin'ny famotsorana ireo gadra amerikana.
"Noho ny fitondran-tena mampikorontan-tsaina ataon'ny Korea Avaratra sy ny fahavononany hampiasa ny mpitsidika amerikana ho trosa mifampiraharaha hitrandrahana fivoriana avo lenta na fifanarahana, mety ho an'ny Etazonia ny mandray fepetra hifehezana ny fitsangatsanganana any amin'ny firenena izay miteraka loza mitatao ankehitriny Tombontsoa amerikana, "hoy i Schiff.
Ny fihenjanana teo amin'i Pyongyang sy Washington dia nihahenjana tato anatin'ny volana vitsivitsy satria nanandratra ny fitsapana ny balafomanga balaonina sy ny programa nokleary i Korea Avaratra ho fanitsakitsahana ny sazy iraisam-pirenena.